WiseView yePC (Windows uye Mac) -Free Download
Kuchengeteka inyaya inokosha kwazvo, uye hatitarisiri kuti chero chinhu chikaitika icho chisina humbowo, rudyi? Ndokusaka isu tiri kunetseka kwazvo izvozvi, uye isu tinowanzoisa zvigadzirwa zvemakamera mumba medu, hofisi, musika, gedhi reimba nezvimwe…
WiseView iko kunyorera kunorerutsa yako yekutarisa system. Zviri sei izvozvo? Enderera kuverenga…
Tinogona kushandisa iyo app pane yedu smartphone, iPad, IOS zvishandiso, uye zvakare muPC. Kana uchida dhawunirodha uye gadza WiseView yePC, just follow this step by step guide about “sei kurodha mahara WiseView App yePC?”
Ndokumbira utarise chinyorwa nezve “maitiro ekurodha pasi nekuisa WiseViewApp yeWindows uye Mac mahara?
1 Dhawunirodha uye Kuisa- WiseView yeWindows 7, 8, 10 & Mac
1.1 Zvimiro zveWiseView zvePC:
Dhawunirodha uye Kuisa- WiseView yeWindows 7, 8, 10 & Mac
For kurodha mahara uye kuisirwa kweWise View App, Unofanira kutevedzera nhanho idzi chete.
The WiseView App inogona kuvhiyiwa neimwe yeiyo software inodzora kudzora kamera uye yayo vhidhiyo vhidhiyo. For chinangwa ichi, unongoda iye mukuru WiseViewApp for the PC.
Usati watanga kuisirwa maitiro e WiseView App ye windows uye Mac, ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kuisa an Android Emulator, seBluestacks, Nox App Player, kana Xeplayer.
Unogona kutevedzera matanho akapusa aya Dhawunirodha WiseView App yePC uye kuisa Anwendung pakombiyuta yako. Nomutsa tevera matanho uye isa Wyze App.
ikozvino, tsvaga iyo Wyze app mune Play Store. Sarudza iyo WiseView App uye tinya gadza.
WiseView ndeye Android application iyo inobatsira vashandisi kudzora mavhidhiyo emakesi ekuchengetedza. nyonyova, ichi chishandiso chinopa mhenyu vhidhiyo kuona yechengetedzo cam pane Smartphones uye Mahwendefa.
Nekubatsira kwekushanda WiFi kana 3G / 4G kubatana, iwe unogona nyore kutarisa kuongororwa. If you have missed any live video then do not worry because you can watch it easily from the saved videos.
Zvimiro zveWiseView zvePC:
WiseView yePC inonzi ndiyo yakanakisa CCTV kamera yekutarisa software yeHanwha Techwin CCTV makamera. Ngationgororei zvimwe zvezvinhu zve software iyi. Zvimiro zveWiseView yeWindows & MAC ndeinotevera:
Rarama hupenyu hwekutarisa hweCCTV kamera.
Kutamba kweiyo yakanyorwa data.
Dual Screen rubatsiro.
Kamera yekubatanidza manejimendi nekufarira.
Kurekodha kutumira kunze.
Ndatenda nekuverenga iyi posvo, ndinovimba, zvirokwazvo ichakubatsira iwe teerera iyo WiseView App yeWindows 7, 8, 10 & Mac uye nakidzwa neWiseView App.
Zvakadaro, Kana uine zvaunobvunza maererano nazvo, wobva wagovana nemutsa mubhokisi remashoko. Pamusoro pe, iwe unoda zvimwe zvinhu, saka usazeza kundibata. Ini ndinogara ndichifara kukubatsira.
Vysor For PC Windows 10/8/7 - Yemahara Kurodha Nyowani Shanduro
Yakazodzwa Pasi: Download Facetime Tagged Na: download and install WiseView For PC, Dhawunirodha WiseView yePC (Windows 7, Free download and install WiseView For PC, Guide for to Download WiseViewApp for PC, maitiro ekurodha pasi nekuisa WiseViewApp yeWindows uye Mac mahara, How to download WiseViewApp for PC